Andro Fahatsiarovana Erantany ilay Famonoana Faobe : Auschwitz an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2020 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Svenska, Ελληνικά, Español, ਪੰਜਾਬੀ, українська, Français, Nederlands, Italiano, English
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny masoivohom-baovao Meta.mk, tetikasa iray an'ny Orina Metamorphosis. Ny dika nasiana fanovàna eto ambany kosa dia ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Auschwitz dia toerana iray maro sosona misy toby fanibohana sy famonoana niisa 40 mahery teo ambany fitantanan'ny Nazi alemàna, tao anatin'ny Polonina nobodoiny, nanakaiky ny tanànan'i Oświęcim. Tamin'ireo olona 1,3 tapitrisa nalefa tao Auschwitz hatramin'ny fotoana nisokafany tamin'ny May 1940, olona 1,1 tapitrisa no maty novonoina taminà entona misy poizina, tsy fanomezana sakafo, harerahana, aretina, famonoana na fidarohana , ary nanaovana fanandramana medikaly.
Ny sary eto ambany dia fananan'ireo tranombakoka marobe tao amin'i Yogôslavia fahiny ary navadiky ny Znaci.net ho lasa tahiry nomerika ety anaty aterineto.
Volana roa no lanin'i Oleg niasàna tao amin'ny faritra natokana ho an'ireo vehivavy, saingy rehefa hitan'ireo Nazi fa feno 11 taona izy, nafindran'izy ireo ho any amin'ny toerana natao ho an'ny lehilahy. Rehefa nahitàna soritraretin'ny tazo vokatry ny rarintsainy, nalefa ho any amin'ny faritra misy ny toerana fitsaboana fanaovan'ilay manamboninahitra SS Josef Mengele andrana. Nandritra ireo herinandro maro tao, nianarany ny nikirakira ny fakàna hafanàna ary namorona tetikady hafa izy mba hitoetra mandrakariva amin'ny maha-olona ilaina arahana maso.
Ny lahatsary etsy ambany, izay sambany hitan'i Mandić nandritra ny fitsidihana iray natao tao Auschwitz, 20 taona taty aorian'ny nanafahana azy, no mampiseho ny fotoana nandraisan'ilay fianakaviana ny taratasy iray nalefan'i Nikolai Bulganin, tànan-kavanan'i Staline nanome baiko ny hitaterana azy ireo ho any Maosko ao anaty fiarabe iray mandalo an'i Krakow. Tao amin'ny renivohitra sôvietika, namonjy andiana Yogoslavy mpitsidika ry zareo, notarihan'ilay mpitarika ny mpanohitra Josip Broz Tito, izay nandray fiaramanidina ny 1 May 1945 niverina niaraka tamin-dry zareo ho any Belgrady.
Mandić, izay 86 taona ankehitriny, dia nanokana ny fiainany ho amin'ny fampahafantarana ny marina momba ilay Famonoana Faobe. Nitarika ONG iray manohitra ny fasista izy tao Opatija, Kroasia, nikarakara fampirantiana, ary nanao famelabelarana sy antsafa tamin'ny fiteny samihafa. Nandraisany anjara ihany koa ireo andiana fitsidihana isantaona mankany amin'ny tranombakoka ao Auschwitch rehefa tonga ny andro fahatsiarovana ny nanafahana ilay toby.